နိူးထမှုအတွက်ဆုတောင်းခြင်း | A Prayer for Revival | Real Conversion
နိူဝင်ဘာလ ( ၂ ) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
“ကိုယ်တော်သည် မိုဃ်းကောင်းကင်ကိုဖွင့်လှစ်၍၊ ဆင်းသက်တော်မူသောပါ စေ။ရှေ့တော်၌တောင်တို့သည် လှုပ်ကြပါစေသော။ မီးသည် အမှိုက်ကို လောင်သကဲ့သို့၎င်း၊ ရေကိုဆူစေသကဲ့သို့၎င်း ဖြစ်ပါစေသော။ သို့ဖြစ်လျှင်၊ ကိုယ်တော်၏ရန်သူတို့သည် နာမတော်ကိုသိ၍၊ ရှေ့တော်၌ လူအမျိုးမျိုးတို့ သည် တုန်လှုပ်ကြပါလိမ့်မည်။” ( ဟေရှာ ၆၄း ၁-၂ )
Dr. John H. Armstrong သည် Reformation and Revival Ministries ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် “ကျရောက်အံ့ဆဲဆဲဧဝံဂေလိအကျပ်အတည်း”စာအုပ်ကိုရေးသားသူ လည်းဖြစ်ပါသည်။ Dr. Armstrong က ဤသို့ဆိုသည်။
အနှောက်တိုင်းလူအဖွဲ့အစည်းကျဆင်းလာခြင်းသည် မေးခွန်းထုတ်မရနိူင် အောင်ဖြစ်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မျက်မှောက်ခက်တွင် ထိုအကြောင်း အရာကိုသိရှိထားပြီးဖြစ်၍ လူ့အဖွဲ့အစည်းကျဆင်းခြင်းကို မျက်မြင်နေကြ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့က အရာတိုင်းဖြစ်ပျက်နေသောနည်းလမ်းသည် အမြဲဖြစ်နေမည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်ကိုသိမြင်ခဲ့ကြသည်။ ရက်အနည်းငယ် ကအကြောင်းတရားသည်သာ တစ်နေ့တစ်ချိန်တွင် ကိုယ်ဝန်မဆောင်နိူင် သည့် “သံကုလားကာ” ဖြစ်လာပေလိမ့်မည်။ (John H. Armstrong, Ph.D., True Revival, Harvest House Publishers, ၂၀၀၁၊ စာ-၁၂၅၊ ၁၂၆ )
သူက ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီး ကျင့်သုံးနေသည့် ကွန်မြူနစ်ဝါဒကြီး ခဏတာအတွင် ကွယ်ပျောက်သွားသကဲ့သို့ ကွယ်ပျောက်မည်အကြောင်း ဆိုလိုပေသည်။ ထိုသို့ဖြစ္လိမ့်မည် ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ Dr. Armstrong သည် ထိုအကြောင်းအရာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၃ နှစ်ဖြစ်သည့် ၂၀၀၁ တွင်ရေးသားခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်သည် တစ်ညသောအချိန်တွင် အိပ်ယာမဝင်မှီ လောက ဟူသောမဂ္ဂဇင်းကို ဖတ် လိုက်ရသည်။ ကျွန်ုပ်တဖြည်းဖြည်းအိပ်မောကျလာသောအခါတွင် စဉ်းစားမိသည်မှာ “ကျွန်ုပ် တို့သည် ထိုအရပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ယခုရှိနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုသည်လည်း တဖြည်းဖြည် ယခုပျောက်ကွယ်စပြုလာပြီ။ ထိုအရာသည် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုသဖွယ် ချက်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားနိူင်သည်” ဟူ၍ဖြစ်သည်။
ထိုအကြောင်းအရာကို ပျောက်ဆုံးနေသော လောကကြီးက နားလည်ခြင်းမရှိပေ။ သို့ရာတွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုများကို ဆုတ်ကိုင်ထားသည့် “ကော်ကပ်” ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းတော်များသည် ထိုသို့မလုပ်ဆောင်နိူင်အောင် အားနည်းလွန်းလှသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝအသက်လမ်းသည် မျက်မှောက်၌ အဆုံးသို့ရောက်လျက်ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် လောဒ်အိန်ဂျယ်တွင် တနင်္ဂနွေညနေပိုင်းတွင် ဝက်ပြုအစီအစဉ်ပြုလုပ် နေကြသေးသည် အသင်းတော်အနည်းငယ်များတွင် ပါဝင်လျက်ရှိကြပါသည်။ အများစုသည် ဗုဒ္ဓဟူးညနေပိုင်း ဆုတောင်းခြင်းကိုတောင် မလုပ်ဆောင်နိူင်ကြတော့ပါ။ ဘုရားသခင် ကူမတော်မူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အထီးကျန်လျက် ခံစားနေကြရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အထီး ကျန်လျက် အားနည်းကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရန်သူများသည် အားကြီးလျက်ရှိကြပါ၏။ သူတို့၏ကြုံးဝါးသောအသံကို နေ့တိုင်းကြားနေရကြပါသည်။ ထိုအရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့အချိန်ကာ လ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏နောက်ဆုံးချိန်၏အစဖြစ်ပါသလား။ မကောင်းသောအတွေးအခေါ်များ သည် ခရစ်ယာန်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲတွင် ကျိန်းအောင်းလျက်ရှိကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင် နိူင်သောအရာကို အံ့ဩလျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့က အသင်းတော်များနှင့် ၎င်းတို့၏ပျက်စီး နေသောသက်သေများကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ကြရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဧဝံဂေလိများ၏အား နည်းချက်များနှင့် လောကဆန်မှုများကို တွေ့မြင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအရာများက ကျွန်ုပ်တို့အား အခြားသောအရာများထက် သာ၍ ဖျက်ဆီးကြပါသည်။
၁၉၅ဝတွင်တည်ရှိကြသော ခရစ်ယာန်များမှာ မရှိကြတော့ပေ။ သမ္မတ Reagan သည်လည်း သေသွားပြီ။ Francis Schaeffer သည်လည်း သေသွားပြီဖြစ်သည်။ John R. Rice လည်းသေသွားပြီ။ Harold Lindsell, Bill Bright, W. A. Criswell, Jerry Falwell နှင့် Dr. Lloyd-Jones တို့သည်လည်း အိမ်တော်ပြန်ခဲ့ကြပြီ။ အသက် ၉၆နှစ်အရွယ် Billy Graham တစ်ဦးတည်းသာ မြောက်ကိုလိုနီးယားတွင် ရှိသည်။ အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှု တွင် အမှောင်ရိပ်လွှမ်းနေသည်ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားခုခံကာကွယ်ပေးရန် အားရှိသောသူမရှိပေ။
ပရောဖက် ဟေရှာယသည်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းပင်ခံစားခဲ့ရလေသည်။ သူအား ဘုရားသခင်ကို ရာဖွေစေသည်။ သူက ဤသို့ဆိုထားပါသည်။
“ချုပ်တည်းတော်မူသလော။အာဗြဟံသည် အကျွန်ုပ်တို့ကိုမသိ၊ ဣသရေလ သည် လက်မခံသော်လည်း၊ အကယ်စင်စစ်ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်တို့အ ဘဖြစ်တော်မူ၏။ အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်တို့အဘဖြစ် တော်မူ၏။ရှေးကာလမှစ၍ အကျွန်ုပ်တို့ကိုရွေးနှုတ်သောဘုရား ဖြစ်တော်မူ ၏။ ( ဟေရှာ ၆၃း ၁၆ )”
Dr. Lloyd-Jones က ဤသို့ဆိုထားပါသည်။
သင်နှင့် ကျွန်ုပ်သည် ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်သို့ ယဉ်းကျေးမှုနာ မည် နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့တွင်သွားနှင့်သောသူများ၏နာမဖြင့် မသွားနိူင်ပါ။ သူတို့သည် မက်ဒသစ်ဖခင်ကြီးများ၊ ပြုပြင်ရေးဖခင်ကြီးများ၊ သန့်ရှင်းသူများ တို့၏ဘိုးဘေးများဖြစ်နေပါစေ ကျွန်ုပ်ဂရုမစိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူတို့၏ နာမည်များဖြစ်ကြသည့် ွAbraham, Jacob စသဖြင့် လျှောက်ထားလေ့မရှိ ဘူး။ “သင်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများဖြစ်ကြသည်။” ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေးသမားများက ကျွန်ုပ်တို့ကို မကယ်တင်နိူင်ပါ။ မက်သဒစ်များကလည်း ကျွန်ု္ပ်တို့ကို မကယ်တင်နိူင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘိုးဘေးများထံသို့ပြန်လည် ကျရောက်နိူင်သည့် အန္တရယ်ထဲ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိူင်ပါသည်။ ထိုသို့မ ဟုတ်ပါ။ ဘုရားပြုသောအမှုသာဖြစ်ပါသည်။ “ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖဖြစ်ပါသည်။” အခြားသောဘုရားမရှိပါ။ “ကိုယ်တော်၏နာမတော်သည် ထာဝရကာလမှ” ထာဝရကာလတိုင်အောင်ဖြစ်တော်မူသည်။ ဘုရားသခင် သည် သေသောသူတို့၏ဘုရားမဟုတ် အသက်ရှင်သောသူတို့၏ဘုရားဖြစ် တော်မူ၏။ အသက်ရှင်သောဘုရားလည်းဖြစ်မူသည်။ (Martyn Lloyd- Jones, M. D., Revival, Crossway Books, ၁၉၈၇၊ စာ-၃၀၁၊၃၀၂ )
ကျွန်ုပ်သည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများထံသို့သွားသည့်အခါ များစွာသောနှစ်ခြင်းများကို တွေ့မြင်ခွင့်ရလို့ဝမ်းသာပါသည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်သည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားများကို ချစ်သကဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားများနှင့် သန့်ရှင်းသူများကဲ့တို့က မကယ်တင်ကြောင်းကို သိရှိရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အား ကူတောင်မကူညီနိူင်ကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ယဉ်ကျေးမှုသည်လည်း ကွယ်ပျောက်သွားသည်။ အပြစ်နှင့်ပြည့်နှက်သည်။ ထိုသူတို့၏ဓမ္မပညာအားဖြင့် ကယ်တင်ရန် သေတမ်းစာကိုပြန်လည်ပြုပြင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်သွားကြရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားများအပေါ်သို့ ဖားလျားချထားနိူင်ခြင်းမရှိပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်ရမည်။ ဘုရားသခင်သာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့အား ကူညီနိူင် သည်။
သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ထံပါးသို့သွား၍ ကျွန်ုပ်တို့၏လူမျိုးများကို ကူညီမစရန်သာတောင်းလျှောက်နိူင်ပါသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူမျိုးများသည်သာ ဘုရားသခင်၏အဓိကလူများမဟုတ်ပါ။ သူတို့သည် အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်နှင့် မည်သည့်အရာမျှ လုပ်ဆောင်လိုခြင်းမရှိကြပါ။ ပရောဖက်ယေရှာယက ဤသို့ဆိုထားသည်။
အကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်မအုပ်စိုးဘူးသောသူကဲ့သို့၎င်း၊ နာမတော်ဖြင့်သမုတ်ခြင်းကို မခံဘူးသောသူကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြပါ၏။ (ဟေ ၆၃း ၁၉)
ဘုရားသခင်၏နာမတော်ကို ချီးမွမ်းပါ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် “ကိုယ်ကျင့်တရာဆိုင်ရာအဓိကကျ သောအရာ” ကိုမလိုချင်သည်သာမက ရှာလည်းမရှာဖွေပါ။ “အမေရိကန်၏ပထမဆုံး” လီပါပရီကန်ပါတီ သို့မဟုတ် အခြားလောကအရာကို မှီခိုအားထားရန်မရှာဖွေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆုတောင်းချက်များကိုလည်း ထိုသို့သောအမှုအရာများအပေါ်တွင် ဖြုန်းတီးရန် မဟုတ်ပါ။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏လက်တော်အောက်တွင် မှီခိုအားထားရန် သာရောက်ရှိလာကြရပါမည်။ “အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်တို့အဘဖြစ်တော် မူ၏။ ရှေးကာလမှစ၍ အကျွန်ုပ်တို့ကိုရွေးနှုတ်သောဘုရားဖြစ်တော်မူ၏။” (ဟေရှာ ၆၃း ၁၆ )
ကိုယ်တော်သည် နိစ္စတည်သော ထာဝရဘုရားဖြစ်တော်မူ၏။
( အိုထာဝရဘုရား၊ ကာလတိုင်းကူညီမစပါ။ Isaac Watts, D.D., ၁၆၇၄-၁၇၄၈ )
ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောကျမ်းပိုဒ်ကိုလေ့လာကြပါစို့။ ပရောဖက်က သူ၏မျက် မူရာအရပ်သည် ဘုရားသခင်အပါးတော်သို့ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ဘုရားသခင်အထံတော်ပါးသို့ လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်တော်သည် မိုဃ်းကောင်းကင်ကိုဖွင့်လှစ်၍ ဆင်းသက်တော်မူပါစေ	သော်။ (ဟေရှာယ ၆၄း ၁ )
ဤဆုတောင်းချက်ကိုပြုသောအချိန်တွင် ဘုရားသခင်၏လူတို့သည် ဆိုးယုတ်သောအ ခြေအနေတွင်ရှိနေကြသည်။ သူတို့သည် စိတ်ပျက်ညှိုးငယ်လျက် အနိမ့်ကျဆုံးသောနေရာ တွင်ဆောင်ယူခြင်းကိုခံကြပေသည်။ ပရောဖက်က သူတို့သည် ငွေကြေးပြည့်စုံလာရန်ဆု တောင်ခြင်းမရှိပါ။ သူတို့စိတ်နှလုံးထဲတွင် ငြိမ်သက်ခြင်းကို ရရှိနိူင်ရန်လည်း ဆုတောင်းပေး ခြင်းမရှိပါ။ အောင်မြင်မှုကို သိမ်းပိုက်ရယူကြရန်လည်းဆုမတောင်းပေးပါ။ သူသည် Joel Osteen ကဲ့သို့မဟုတ်ပါ။ ထိုအရာသည် သူတို့၏အလိုအပ်ဆုံးသောအရာမဟုတ်ဟု ထင်မိသည်။ ဟေရှာယက သူတို့၏အဓိကအလိုအပ်ဆုံးသောအရာမှာ သူတို့အလယ်တွင် ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်ရှိနေရန်ဟု ထင်မိသည်။ ထို့ကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည် ကြီးမားသောဆုတောင်းချက်ကို သူပြုခဲ့သည်။
ကိုယ်တော်သည် မိုဃ်းကောင်းကင်ကိုဖွင့်လှစ်၍ ဆင်းသက်တော်မူပါစေ သော်။ (ဟေရှာယ ၆၄း ၁ )
ကျွန်ုပ်သည် Dr. J. Vernon McGee နှင့်သဘောထားမတိုက်ဆိုင်ဖြစ်ခဲသည်။ သို့ရာတွင် ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သူ၏အနက်ဖွင့်ဆိုမှုကိုမူ သဘောမတွေ့ဖြစ်မိသည်။ သူက “ဟေရှာယသည် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအတွင်း ဂျူးလူမျိုးများ၏ဆုတောင်းခြင်းကို ကြိုတင်ဟောကြားခြင်းဖြစ်ကြောင်း” ဆိုခဲ့သည်။ (Thru the Bible, အတွဲ ၃၊ စာ-၃၄၂၊ ဟေရှာယ ၆၄း ၁ နှင့်ပါတ်သက်၍မှတ်စု ) ဤသည်မှာ ခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာသည့် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလတွင် ဂျူးလူမျိုးများတို့၏ဆုတောင်းချက်ကို ကြိုတင်ဟောပြောခြင်းဟူ သည်မှာ လုံးဝမှားယွင်းနေပါသည်။ ထိုသို့ဆုတောင်းကြပေမည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းသည် ကျမ်းပိုဒ်၏အဓိကဖော်ပြချက်မဟုတ်ပေ။ ပရောဖက်က ဘုရားသခင်အခုကြွလာတော်မူရန် ဆုတောင်းနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Spurgeon နှင့် Dr. Lloyd-Jones တို့နှစ်ဦးစလုံးက ဤသည်မှာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းကြွလာရန်အတွက် ဆုတောင်းချက်ဟုဆိုကြပါ သည်။
ကိုယ်တော်သည် မိုဃ်းကောင်းကင်ကိုဖွင့်လှစ်၍ ဆင်းသက်တော်မူပါစေ (သော်။ (ဟေရှာယ ၆၄း ၁ )
Dr. Lloyd-Jones က “နိူးထမှုတွင် ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အလည်အ ပတ်ရောက်ရှိခြင်းအတွက် ထူးခြားပြီး ဆောလျှင်သောဆုတောင်းခြင်းသည် နိူးထမှုနှင့်ဆက် စပ်မှုရှိသော နောက်ဆုံးဆုတောင်းချက်ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်မဆိုလိုပါ” ဟုဆိုပါသည်။ Cowper ၏ သီချင်းစာပိုဒ်ထက် သာ၍ကောင်းမွန်လှပသောလျှောက်ထားချက်ကိုပေးနိူင်သည့် စကား လုံးမရှိပါ။
….ထိုအရာမှာ နိူးထမှုတွင်ဖြစ်ပျက်သောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, ၎င်း၊ စာ-၃၀၅ )
“ဘုရားသခင်ကြွလာတော်မူပါ” ဟူသည်မှာ အဘယ်အရာကို ဆိုလိုပါသနည်း။ အဘယ်အရာဆိုလိုသည်ကို အသေးစိတ် ကျွန်ုပ်ရှင်းပြပါမည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဆန်ဖရန်စ္စကို မြောက်ပိုင်းရှိ မီးလ်မြစ်ဝှမ်းတွင် အသင်းတော်တစ်ခုကို အစပြုပြီး လော့ဒ်အိန်ဂျယ်လ်သို့ပြန် လာခဲ့သည်။ သူတို့က “သားတော်ပွဲ”တွင် တရားဒေသနာဟောကြားရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဆန်ဖရန်စ္စကို ကိုလေယာဉ်နှင့်ပြန်ပြီး မြောက်ဘက်တွင် နာရီအနည်းငယ်သာ မောင်းနှင်ရသောခရီးဖြစ်ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ကွင်းပြင်တွင် ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ချဉ်းကပ်လာသည်နှင့်အမျှ ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်ကို စတင်တွေ့မြင်လာ သည်။ ကျွန်ုပ်ကားထဲမှာ ထွက်လာသောအခါ ဖောင်ပေါင်းများစွာသောလူငယ်များကို တွေ့ရ၍ အံ့ဩမင်သက်မိသည်။ တေးသီချင်းအနည်းငယ်သီဆိုအပြီးတွင် ကျွန်ုပ်ကို မိတ်ဆက်ပေးကြ သည်။ ကျွန်ုပ်သည် လူအုပ်ကြီးရှေ့တွင် မတ်တပ်ရပ်လျက် ကျွန်ုပ်အသုံးပြုမည့် ကျမ်းပိုဒ်ကို မိုက်ခရိုဖုန်းဖြင့် ဖတ်ကြားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်သည် ညအချိန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ မှိတ်တုတ်မှိတ် တုတ်အလင်းရောင်မတွေ့ရဘဲ အလွန်ပင်မိုက်လပေသည်။ မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့် အလင်းရောင်တို့က မီးအားမြင့်စက်မှ ဓါတ်အားကို ရရှိကြသည်။ ကျမ်းပိုဒ်ကို ဖတ်လျှင် ဖတ်ပြီးချင်း မီးပျက်သွားခဲ့ သည်။ မိုက်ခရိုဖုန်းလည်းအသက်မဲ့သွားပြီ။ အလင်းများအားလုံးကွယ်ပျောက်ခဲ့ပြီ။ မိမိလက် တောင်မမြင်နိူင်လောက်အောင် မှောင်မိုက်ခဲ့သည်။ “အဘယ်အရာကို လုပ်ဆောင်နိူင်မည် နည်း” ဟု ကျွန်ုပ်တွေးမိသည်။ ရာပေါင်းများစွာသော လူငယ်များသည် အောက်တွင် ထိုင်လျက်နေကြသည်။ ထိုအထဲတွင် အများစုသည် ဘုရားကျောင်းအရိပ်တွင် မလာစဖူးသူ များသာဖြစ်ကြပါသည်။ ကျွန်ူပ်အဘယ်အရာကိုပြောရမည်နည်း။ မှောင်မိုက်ထဲတွင် အဘယ် အရာကို ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်နိူင်မည်နည်း။ ထို့နောက်တွင် ဘုရားသခင်ဆင်းကြွလာခဲ့သည်။
“ကိုယ်တော်သည် မိုဃ်းကောင်းကင်ကိုဖွင့်လှစ်၍ ဆင်းသက်တော်မူပါစေ သော်…”
သင်သည် မျက်မှောက်တော်ကိုခံစားနိူင်ရန် ဘုရားသခင်သည် ထိုသို့သော တန်ခိုး တော်ဖြင့်ဆင်းကြွလာသည်ဟုသာ ကျွန်ုပ်ဆိုနိူင်သည်။ ကျွန်ုပ်က စတင်တရားဟောပါတော့ သည်။ထိုအရပ်တွင် အလင်းမရှိ၊ မိုက်ခရိုဖုန်းလည်းမရှိ။ တစ်ခုမျှ မလိုအပ်ပြီ။ ဘုရားသခင်သည် မှောင်မိုက်နေသောညအလယ်တွင် သူ၏အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်လျက်နေ သည်။ ကျွန်ုပ်တွေးတောရန်ပင်မလိုဘဲ တရားဟောပြောခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်နှုတ်မှ စလုံးများ အကပ်လိုက်ထွက်လာသည်။ လူငယ်များအားလုံး တိတ်ဆိတ်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်အသံမှတပါး အခြားအသံမကြားရတော့ပြီ။ ကျွန်ုပ်တရားဟောပြီးလို့ တစ်စက္ကန့် သို့မဟုတ် နှစ်စက္ကန့်အကြာ တွင် အဘယ်အရာဖြစ်လာမည်ကို တွေးပူနေမိသည်။ ချက်ချင်းပင် အသံကြားလိုက်ရသည်။ မီး စက်ပြန်လာသည်။ ကွင်းပြင်တစ်ခုလုံးတွင် ရုတ်တရက်အလင်းပြန်ရလာသည်။ မိုက်ခရိုဖုန်း လည်းအားပြန်ရလာသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ရိုးစင်းသော စိန်ခေါ်မှုကို ပြုလုပ်သောအခါ ရာပေါင်း များစွာသော ပျောက်ဆုံးသူတို့သည် ဝမ်းမြောက်လျက် ကျွန်ုပ်ထံရောက်လာကြသည်။ အချို့မှာ မျက်ရည်များပင် စီးကျလာကြသည်။ တေးသံမရှိ သူတို့သည် ခြေကျင်ဖြင့်လာပြီး ဒူး ထောက်ကြသည်ဖြစ်၍ သူတို့အသံမှ တပါး အခြားအသံမရှိ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူတို့နှင့်အတူ အချိန်အကြာကြီး ဆက်ဆံခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ Rev. Mark Buckley က ထိုမနေ့နိူင်ဖွယ်ရာညတစ်ညကို သတိရနေမည်ဟု ထင်သည်။ ထိုညသည် မီးပျက်သွားပြီး ဘုရားသခင်ဆင်းသက်လာသောည၊ အရက်သေစာစွဲမက်သူများ ခရစ်တော်၏အသွေးတော် အားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့်အတူ ငြိမ်သက်ခြင်းကို တွေ့မြင်ခဲ့သောည ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန်၊ ဥရောပ၊ အာရှ၊ နှင့် အာဖရိကတို့တွင် ထိုသို့သော နိူးထမှုထဲမှ အသင်းတော် ပေါင်း ၄၀ ကျော်ခုန်ပေါက်နေကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် ထိုသို့လုပ်ဆောင်နိူင်သည်။ ထိုသို့ အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိူင်လိမ့်မည်။ Spurgeon က “ဘုရားသခင်၏လုပ်ငန်းကို ဘုရားသခင်ကသာလျှင် လုပ်ဆောင်နိူင်သည်” ဟုဆိုပါသည်။
“ကိုယ်တော်သည် မိုဃ်းကောင်းကင်ကိုဖွင့်လှစ်၍ ဆင်းသက်တော်မူပါစေ သော်….”
၁၉၆၉ခုနှစ် ပထမတရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်တွင် ဘုရားကျောင်းထဲသို့မဝင်ရောက်မှီ ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်ကို ခံစားရပေသည်။ ထိုအရာနှင့်ပါတ်သက်၍ အားကြီးသော အရာမရှိပေ။ ဘုရားသခင်သာလျှင်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်က လေထဲတွင်ရှိသော လျှပ်စီးကဲ့သို့ အစိတ်အပိုင်းမျှသာဖော်ပြနိူင်ပါသည်။ ထိုအရာကို သမ္မာကျမ်းစာက ဘုရားသခင်၏ “ဘုန်းတော်” ဟုခေါ်ပါသည်။ ထိုအရာကို ဟေဗြဲဘာသာစကား “ အလေး” ဟူသောစကားလုံး မှ ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ သင်သည် ဘုန်းတော်ကို ခံစားရပေမည်။ လေထဲက ဘုရားသ ခင်၏အလေးကို ထိတွေ့ကြရပေမည်။
Rhys Bevan Jones က ဝေးလနိူင်ငံတွင်ဖြစ်ပေါ်သည့် နိူးထမှုတစ်ခုကိုဖော်ပြသော အချိန်တွင် အဘယ်အရာဆိုလိုသည်ကို ကျွန်ုပ်အတိအကျသိနိူင်ပါသည်။
နေရာတစ်ခုလုံးသည် ရုတ်တရက်ပင် တခဏချင်းတွင် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်နှင့် ကြောက်မက်ဖွယ်ရာပြည့်စုံလျက်ရှိပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသောမျက်မှောက်တော်သည် တရားဟောသူကိုယ်တိုင်ပင် အံ့ဩ ထိတ်လန့်ပြီး သူမတ်တပ်ရပ်သည့် တရားစင်ပင်လျှင် ဘုရားသခင်၏အလင်း တော်နှင့်ပြည့်စေသည့်တိုင်အောင် ထင်ရှားလျက်ရှိ်ပါသည်။ ထိုအရာကို ထိုအရပ်တွင် ချန်၍ထားကြပါစို့။ စကားလုံးများမဟုတ်ဘဲ ပြက်ရယ်မှုများ သည်ထိုသို့သောအတွေ့အကြုံကိုတွေ့မြင်နိူင်သည်။ (Brian H. Edwards, Revival! A People Saturated with God, Evangelical Press, ၁၉၉၁၊ စာ-၁၃၄ )
၁၉၀၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နာဝါရီလတွင် တောင်ကိုးရီးယားနိူင်ငံတွင် လူတို့အလယ်၌ ဘုရားသ ခင်ဆင်းသက်သောအချိန်တွင် သာသနာပြုဆရာတစ်ပါးက “လူတိုင်းသည် ဘုရားကျောင်းအ တွင်းထဲသို့ဝင်ရောက်လာကြသည်ဖြစ်၍ အခန်းထဲတွင် ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်ကို အပြည့်အဝခံစားခဲ့ကြရသည်။ ထိုညတွင် ဘုရားသခင်သည် လုံးဝမဖြစ်နိူင်ဖွယ်ရာပင် ဘုရားသခင်၏အနီးတွင်ရှိနေခြင်းကို Pyongyang တွင်ခံစားခဲ့ရသည်။” (Edwards, ၎င်း၊ စာ- ၁၃၅၊ ၁၃၆) Brian Edwards က “ လူတို့အား အပြစ်ကို နက်ရှိုင်းစွာဖော်ပြပေးထားသော ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်သည် မရှောင်လွှဲ နိူင်သောအချက်တွင်ရှိနေသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် နိူးထမှုကို ကြုံတွေ့ကြရပေသည်” ဟုဆိုထားပါသည်။ (Edwards, ၎င်း၊ ) Dr. Armstrong က “ နိူးထမှုကြီးဖြစ်လာသောအခါ ယုံကြည်သူနှင့် မယုံကြည်သူများသည် ဘုရားသခင်သည် တန်ခိုးကြီးသောနည်းလမ်းဖြင့် ထင်ရှားတော်မူကြောင်းကို သတိပြုမိကြသည်” ဟုဆိုပါသည်။ (Armstrong, ၎င်း၊ စာ- ၅၃ )
“ကိုယ်တော်သည် မိုဃ်းကောင်းကင်ကိုဖွင့်လှစ်၍ ဆင်းသက်တော်မူပါစေသော်….”
လူအချို့တို့သည် အတူတကွစုရုံးကြပြီး ဟေရှာယ ၆၄း၁တွင် တွေ့ရသည့်အတိုင်း ဆုတေငာင်းပဌနာပြုကြမည်ဟု မျှော်လင့်မိသည်။ သင်တို့သည် တစ်ယောက်တည်းအထီး ကျန်နေသောအချိန်တွင် သင်တို့ကျမ်းစာအုပ်ထဲရှိ ဤကျမ်းပိုဒ်ကို လှန်၍ ပရောဖက်၏ဆု တောင်းစကားကို သင်၏စကားကဲ့သို့ဖြစ်စေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်တွင် နိူးထသောတန်ခိုး တော်များဖြင့် ဘုရားသခင်ဆင်းသက်လာရန် ဆုတောင်းရမည်။ ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးချပေး ပါစေ။
မည်သူတို့အတွက်ဆုတောင်းရမည်နည်း။ အများသောအားဖြင့် မပြောင်းလဲသေးသော သူများအဖို့ဦးစားပေးဆုတောင်းရမည်။ သင်၏အပြစ်ကို ဘုရားသခင်က နက်နက်နဲနဲသိမြင်စေ ရန် ဆုတောင်းရမည်။ သင်၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်ရှိသော မှောင်မိုက်သောအပြစ်ကို ပထမဆုံးသိ မြင်ခြင်းမရှိခဲ့လျှင်မူ အသက်တာတွင် ခရစ်တော်လိုအပ်သည်ဟု ခံစားလာမည်မဟုတ်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဆင်းကြွလာပြီး သင့်အားအပြစ်ရှိပြီး ပျောက်ဆုံးသောသူဖြစ် သည်ဟု ခံစားစေရန်ဆုတောင်းပဌနာပြုရပေမည်။ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ခရစ်တော် ကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီး သူ၏အဖိုးမဖြတ်နိူင်သောအသွေးတော်မြတ်ဖြင့် သင်၏အပြစ်ကိုဆေး ကြောတော်မူမည်အကြောင်း ဆုတောင်းပေးမည်။ ထိုသို့သောအရာများကို သင်၏အသက်တာ တွင် ဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်တော်မူရန် ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပဌနာပြုရပေမည်။ Dr. Chan ကျေးဇူးပြုပြီးဆုတောင်းဦးဆောင်ပေးပါ။ အာမင်……။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို Mr. Abel Prudhomme ကဆောင်ရွက်သည်။ ဟေရှာယ ၆၄း ၁-၄
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ Mr. Benjamin Kincaid Griffith ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းသည်။ “ယေရှု၊ ကိုယ်တော်လူများကို အဘယ်မှာတွေ့ဆုံသနည်း”၊ William Cowper, ၁၇၃၁-၁၈၀၀ ရေးစပ်သည်။ )